Beesha caalamka oo walaac ka muujiyay heshiiskii doorashada ee lagu gaaray Muqdisho - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Beesha caalamka oo walaac ka muujiyay heshiiskii doorashada ee lagu gaaray Muqdisho
Saaxiibbada beesha caalamka ee taageeraya Soomaaliya, ayaa sheegay in ay ka xumaadeen qodobadii lagu heshiiyay ee kasoo baxay shirkii madaxda Federaalka iyo shanta maamul ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed ay wada jir u soo saareen, ayaa ku sheegeen in ay ka xun yihiin nidaamka doorasho ee ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
Waxa ay tilmaameen nidaamka lagu heshiiyay ee doorashada dadban ay meesha ka saarayso hiigsigii muddada dheer la sugayay ee ahaa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooranayo xubnaha baarlamanka.
War-saxaafadeedka ay waddajir u soo saareen waddama lashaqeeya Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in heshiiska la gaaray u baahanyahay in laga bixiyo faah faahin dheeraad ah.
22 xubnood oo isugu jira dalal iyo ururro caalamiya, ayaa ku baaqay in doorashada Soomaaliya noqoto mid cad oo xor isla markaan loo dhanyahay
Xubnaha beesha caalamku waxay ku boorriyeen siyaasiyiinta in doorashada 2020/21 ay noqoto mid cad oo xor ah, isla markaana caddaalad ah loona wada dhan yahay.
Dalka iyo ururada wada hir u soo saaray war-saxaafadeedka, ayaa kala ah.
Belgium, Denmark, Ethiopia, European Union, Finland, France, Germany, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Ireland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Sudan, Turkey, Uganda, United Kingdom, United States of America, and the United Nations.
Muxuu yahay Xiriirka Farmaajo uu imaaraadka ka raadinayo xilligan ? | Akhri Xogtan
Talyaaniga oo Dabdamis iyo doon ku wareejiyay G.Banaadir, Sawirro